मोदी आउँदा बिदा, मुखर्जी आउँदा बिदा – के बिग्रन्थ्यो एकदिन राष्ट्र निर्माता सम्झिँदा ? -
मोदी आउँदा बिदा, मुखर्जी आउँदा बिदा – के बिग्रन्थ्यो एकदिन राष्ट्र निर्माता सम्झिँदा ?
महेश नेपाल / काठमाडौं। कसैको बाउको बि’र्ता हैन यो देश । कसैको जन्मदिनमा का’ट्ने केकको टु’क्रा हैन यो दे’श । हाम्रा आमा हरुले पानी सम्म नखाई प्याकप्याक्ती हुँदा समेत अन्तिम श्वास रहँदा सम्म श’त्रु संग लडेर जोगाएको दे’श हो यो । जसको नेतृत्व राष्ट्र नायक श्री ५ बडामहाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले गरेका थिए । आज उनैको जन्म दिनको ब्यवास्था गर्दैछ ह त्या रा नेतृत्व । तिनले १७ हजार नेपाली दाजुभाई मा र्न सुरु गरेको,र’गत पसिना चु’स्न सुरु गरेको र देशलाई ख’रानी बनाउन सुरु गरेको दिनलाई आ तँ’क का’री दिवस ए हैन हैन ज’नयु’द्ध दिवस मनाउँछ तर सिङ्गो देश नेपाल बनाउने मान्छेलाई न ग’न्छ’ न एकता दिवस मनाउँछ।
मेरा साना दु’:ख’ले आर्ज्याको मुलुक हैन’ । बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड हो यो भनाई । यो भनाईले संसार बोलेको छ । कति दु:खले, कति मेहनतले हाम्रा अग्रजले अंग्रेजको पञ्जाबाट जोगाएर राखेको देश हो यो । संसारभरीका हरेक देशले अरुको गुलामी सहेर मुक्त भएको दिनलाई स्वतन्त्रता दिवस मनाउँछन तर हामी छाती फुलाएर संसारको कुनै शक्ति संग नझुक्ने वीर गोर्खाली हौँ भनेर भन्ने हैसियत कस्ले बनाईदियो हेक्का रहोस ।
गोजिमा श्री ५ को सरकार लेखेको नागरिकता बोक्छौ, बिदेश जाँदा वीर गोर्खालीको देश भनेर खोक्छौ तर राष्ट्र निर्माताको शालिक ढा’ल्छौ, ईण्डियन कु’त्ता पाल्छौ । ईष्ट ईण्डिया कम्पनीको दास ईण्डियन राष्ट्रपती आउँदा सार्वजनिक विदा दिन्छौ, मोदी आउँदा क’र्फ्यु लगाउँछौ । राष्ट्र टु क्रा’उँछु भन्ने सुँगुरहरुलाइ ज्वा’इँ झै पाल्छौ । देश बनाउने पृथ्वीनारायण शाहको फोटो मन्त्रालय बाट फाल्छौ । अनि ले’निन, माओ र गान्धीहरुको फोटो भित्तामा टाँस्छौ । के गरेको छ लेनिनले नेपालको लागि ? के गरेको छ माओले हाम्रो लागि ? तिनले कर्णालीमा पुल बनाईदिए ? पुर्व पश्चिम राजमार्ग बनाईदिए ? कि तिनले हामीलाई वीर गोर्खाली बनाईदिए ? तिम्रो न’क्कली राष्ट्र’वाद छर्ल’ङग भैसकेको छ ।
उल्टो हामीलाई देश द्रो’ही ठान्छौ ग’द्दा’रहरु हो ? देश बनाउनेको सम्झनामा एक दिन एकता दिवस मनाउँदा तिमिहरुको के बिग्रन्छ ? हुन त भालुलाई पुराण सुनाएर के काम ? बाउ म र्दा कृया नगर्ने हरुलाई, देश टु’क्रा’उने नै मुख्य उदेश्य भएकाहरुलाई, देश टु’क्रा’एर लेण्डु’पको सिको गर्दै छोटे राजा बन्ने सोच भएका हरुलाई सिङो नेपाल बनाउने मान्छे श’त्रु लाग्नु स्वभा’बिक पनि हो । याद राख ! गणतन्त्र आफ्नो बाउको बिर्ता सम्झनेहरु हो । यो तिमिहरुले गणतन्त्र ल्याएको मुलुक श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहले खाई नखाई संसार क’ब्जामा लिने शक्तिशाली शक्ति अँग्रेज हरुलाई समेत घुँ’डा टेकाएर टिकाएर राखेको देश हो । जहाँ तिमिहरु अहिले राज गरिरहेका छौ त्यो पहिले पचासौँ टुक्रामा बिभाजित थियो ।
अयोध्याबारेको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्रीले आ’त्मआ’लोचना गर्नुपर्छ :…
कुनै समयकी चर्चित नायिका यस्तो अबस्थामा पशुपतिमा भेटिइन, सुनाइन उनको काहानी [भिडियो…